Zimbabwe loses as CITES votes to keep ivory trade ban - The Source
Zimbabwe loses as CITES votes to keep ivory trade ban
Posted on October 3, 2016 in Africa, Commodities, International, Tourism, Trade, World, Zimbabwe
HARARE,October 3 (The Source) – A ban on the commercial trade of Ivory will remain in place after member countries of the United Nation’s Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) on Monday voted against Zimbabwe’s proposal to have the ban lifted.
Zimbabwe, together with Namibia had been pushing for the trade of ivory to be legalized arguing that the restriction had spurred poaching and that allowing trade would bolster conservation efforts.
At 84,000, Zimbabwe’s elephant population is twice that of its carrying capacity, triggering conflict between wildlife and rural communities.
Zimbabwe has previously stated that the country has lost 439 tonnes of ivory worth $226 million to illegal hunting as a direct result of the ban.
Reuters on Monday reported that in secret ballots, Namibia’s proposal lost 73 to 27, Zimbabwe’s 80 to 21, with two-thirds majority required to pass.
Previous Post: Hwange Colliery reports $28mln H1 loss
Next Post: Zimbabwe losing $1 billion a year to corruption – report